Gufgaf|Online एक सुन्दर युवतीले लभ लेटर पठाएकी थिइ मैले वास्तै गरिन - ऋषि धमला
एक सुन्दर युवतीले लभ लेटर पठाएकी थिइ मैले वास्तै गरिन - ऋषि धमला
आज बाट प्रदर्शनका ३ चलचित्र हरु मध्यको एक चलचित्र हो अनुराग । पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुती रहेको चलचित्र अनुरागमा धमला पत्नी नामले चर्चित बनेकी नायिका एलिजा गौतम र समुन्द्र पण्डितले डेव्यु गरेका छन् । उक्त चलचित्र कथावस्तु र पात्र भन्दा पनि ऋषि धमलाका कारण चर्चामा आएको छ । टेलिभिजन कार्यक्रम धमलाको हमलामा अनेक उट्पट्याङ प्रश्नहरुका कारण उनि बिवादमा समेत आउने गरेका छन् । आज हामीले चलचित्र अनुरागकै विषयमा पत्रकार तथा निर्माता ऋषि धमला माथि नै हमला गरेका छौ ।
— धमला जी स्वागत छ तपाइलाई धमला माथि हमलामा
धन्यवाद छ तपाइलाई
—तपाइको नाम त ऋषि राज धमला रहेछ, तर यस अघि तपाइले त्यो राज किन लुकाउनु भयो जनता जान्न चाहान्छन्
मैले अनुरागका कारण राज लुकाएको हु । एक दिन चलचित्र बनाउछु अनि राज हाल्छु भन्ने थियो । अनुराग बनाए त्यसपछि राज थपेको हु ।
—तपाइ कलाकार देखि राजनितीज्ञ सबैलाइ यो भएन त्यो भएन भनेर प्रश्न गरिरहनु हुन्छ अब सबैले तपाइलाइ प्रश्न गर्ने छन् उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ ?
एक दमै तयार छु, चलचित्र अनुरागका विषयमा सबैले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन तयार छु ।
— यो चलचित्र तपाइ अफैले बनाएको अनि श्रिमतीले अभिनय गरेको हुनाले मात्र ऋषि धमलालाई पन परेको हो भन्छन् नि ?
त्यो कुरा गलत हो । म राम्रो लाई राम्रो भन्छु , मैले दर्शककैे आँखा बाट चलचित्र हेरेर नै मन पराएको हु ।
—तपाइलाई त धेरै अगाडी देखि विभिन्न गालिका वर्षा आउने गर्थे तर तपाइले त्यसलाइ सजिलै पचाउनु भयो तर अहिले तपाइकी श्रिमती एलिजालाई गालि गर्ने पनि एउटा जमात छ नि, कस्तो लाग्छ ?
एलिजालाइ गालि गर्ने,चाहाने, मायाँ गर्ने सबै किसिमका मनिस छन् । गालिको मुख्य कारण चै मलाइ के लाग्छ भने ऋषि धमलाको नाममा एलिजाको रुपको समिश्रण भयो, त्यसैले गालि गर्नेहरु उत्साहित भए । मलाइ गालि गर्ने भनेको म टाढा हुदा मात्र हो जबमा सामुन्यमा पुग्छु, ओ धमला जि के छ भन्दै त्यहि मानिस बोल्न आउछ जो मलाइ गालि गर्छ, त्यसैले म यस्तो कराको पछि लाग्दिन ।
—तपाइले त ३८ वर्षको उमेरमा २० वर्षकी केटि बिवाह गर्नु भयो । तपाइ ३८ वर्ष सम्म विवाह नगरी कसरी बस्नु भयो ? बिवाह अघि कति जना सग अफएर थियो ?
एउटा पनि थिएन,तर निकै अगाडीको कुरा हो,एक सुन्दर युवतीले लभ लेटर पठाएकी थिइन्, तर मैले वास्तै गरिन । कीनकी म हरेक पल काममा ध्यन दिन्थे । हरेक क्षण कामलाई ठुलो ठान्थे, त्यसैले त आज ऋषि धमला यो स्थान सम्म आइ पुगेको छ ।
—तपाइको विचारमा सरकारले बिवाह गर्नका निम्ति कम्तिमा २० वर्ष पुरा हुनै पर्ने कानुन बनाएको छ,के यो आवस्यक छ ?
हैन यो अत्यन्तै आवस्यक छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि त्यस्ता परिवारहरु छन् जस्ले १२ काट्न नपाउदै विहे गरिदिन्छन् । अझ मधेशी समुदायमा यो बिकृती धेरै हुने गरेको छ ।
—तपाको चलचित्र अनुरागमा नायक र नायिकाको जोडि मिलेन भन्ने टिप्पर्णी आउने गरेका छन् नि
हो त्यो मैले पनि फिल गरेको कुरा हो ,तर दर्शकले त्यो कुरा पचाउछन् किन भने पहिले राजेश हमाल ५० वर्षको हुदा ३० वर्षका नायिका हरुसंग धेरै अभिनय गरेका थिए । महिला शसक्तिकरणका निम्ति नायिका भन्दा कम उमेरको नायक पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि मेरो चलचित्रले दिन खोजेको छ ।
—तपाईले धेरै नायिकाहरुलाई सोध्नुभएको प्रश्न हो यो तपाइ की श्रिमती एलाजाले चलचित्रमा अभिनय गरिरहदा निर्देशक सँग सम्बन्ध बढ्ला भन्ने सोच आएन ?
मलाई त्यो सोच आएन, कीन भने मानिसले आफ्नो सोच लाई सकारात्मक बनाउन आवस्यक छ ।
—अनि यो सब थाहा पाई पाई तपाइले चै किन सोध्नु भएको त अन्य नायिका हरुलाई
हैन म त मेरी श्रिमतीलाइ पनि सोध्छु, सबैलाई सोध्छु । किन भने वाहा हरु भनेको सेलिब्रटि हो, र वाहा हरुलाई हामीले यस्ता प्रश्न गर्नुपछ ।
—तपाईले चलचित्रमा लगानी गर्नु भएको छ ,तर दर्शकले चलचित्र अनुराग मन पराएनन् भने अर्को चलचित्र बनाउने आट गर्नुहरन्छ ?
म बनाउछु, समयको म्यानेज गर्न सके भने बनाउछु,
—नेपालको परिवेशमा पत्रकारीता गरेर चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था छ ?
हामीले करिव १ करोड ७५ लाख लगानी गरेका छौ तर यसमा मेरो मात्र लगानी छैन, अन्य धेरैको छ कसैको १० लाख छ त कसैको १५ लाख छ, यसरी नै हामीले चलचित्रको बजेट तयार गरेका छौ ।
—एलिजा गौतमले होम प्रडक्सन भन्दा बाहेकका चलचित्रहरुमा अभिनय गर्ने अवसर आउछ ?
आउछ किन नआउनु दिपकराज गिरीले बनाउने चलचित्र होस अथवा जस्ले बनाउने चलचित्रमा पनि यदि कथा चित्त बुझेको खण्डमा उनि अभिनयका निम्ति तयार हुने छिन् ।